Tababar Garoowe loogu soo xiray Shaqaalaha W/Maaliyadda ee Waaxda Cashuuraha[Sawirro] – Wasaaradda Maaliyadda
Waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyey magaalada Garoowe gaar ahaana Xarunta W/Maaliyadda Tababar u socday shaqaale ka tirsan Wasaaradda oo ka socday Saddex gobol oo Puntland ah.
Agaasimaha Waaxda Qorsheynta,Tababarada iyo Tirakoobka Cabdiqaadir Cali Ismaaciil oo ka hadlay muhiimada Tababarka ayaa sheegay in shaqaaluhu si wanaagsan uga faa’ideysteen casharada ay qaateen.
Xiriiriyaha Barnaamijka PFM Cabdiqaadir Axmed Xaashi ayaa sheegay in Tababarkan ay bixinayeen khuburo ka socotay Bangiga Adduunka iyo Hay’adda UNICOM.
Agaasime Kuxigeenka dakhliga W/Maaliyadda ahna Kusimaha Agaasimaha guud Cismaan Buux Cali ayaa isna dhankiisa kula dardaarmay shaqaalaha W/Maaliyadda iney casharadii ay barteen sidoo kale uga faa’ideeyaan shaqaalaha kale,isla markaana ugu shaqeeyaan bulshadooda.
Wasiir Kuxigeenka Dakhliga ee Wasaarada Maaliyada Puntland Mudane Maxamed Jibriil Cateeye oo soo xiray Tababarka ayaa shaqaalaha ku Ammaanay iney ka faa’ideysteen mudadii uu socday,wuxuuna u rajeeyey guul.
Kulan looga hadlay horumarinta Bangiyada Puntland oo lagu qabtay W/Maaliyadda Puntland [Sawirro]